सक्रिय यौन जीवनले हृदयघातको खतरा कम गर्छ ? — Paschimnews.com News From Nepal
सक्रिय यौन जीवनले हृदयघातको खतरा कम गर्छ ?
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/७/१८ गते
दम्पतीबीच हुने यौन सम्बन्धको अनेक फाइदा छ, शारीरिक रुपले, भावनात्मक रुपले । नियमित र सक्रिय यौन सम्बन्धले दम्पतीको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्‍याउँछ । यौन सम्बन्ध बनाइरहँदा उनीहरु चिन्तामुक्त हुन्छन् । आनन्द र खुसी अनुभूत गर्छन् ।
हृदयघातपछि सक्रिय व्यक्तिहरुको यौन जीवन पनि सक्रिय रहेको पाइयो । तुलनात्मक रुपमा उनीहरुको आयु लामो थियो ।
युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा डिपार्टमेन्ट अफ बिहेविअरल साइन्स एन्ड हेल्थका प्रमुख एन्ड्र्यु स्टेपटोले भनेका छन्, ‘यसमा अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । यौनमा सक्रिय व्यक्ति रिलेसनसिपमा थिए, जवान थिए र खासगरी स्वस्थ्य थिए ।’